PR ပညာရှင်များ - သင်သည် CAN-SPAM မှကင်းလွတ်သည်မဟုတ် Martech Zone
PR ပညာရှင်များ - သင်သည် CAN-SPAM မှကင်းလွတ်သည်မဟုတ်
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 20, 2010 အင်္ဂါနေ့, မေလ 10, 2016 Douglas Karr
CAN-SPAM ၏လုပ်ရပ်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ ထွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်အီးမေးလ်များကိုပေးပို့ဆက်လက် သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်မြှင့်တင်ရန်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ။ CAN-SPAM လုပ်ရပ်သည်ရှင်းပါသည်။စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သောမည်သည့်အီလက်ထရောနစ်မေးလ်မဆို။"
ဘလော့ဂါများကိုသတင်းဖြန့်ဝေသည့် PR ပညာရှင်များသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသည် The FTC လမ်းညွှန်ချက်များ စီးပွားဖြစ်အီးမေးလ်များအတွက်ရှင်းလင်းသည် -
နောင်လာမည့်အီးမေးလ်များကိုမည်သို့လက်ခံမည်ကိုလက်ခံသူများအားပြောပြပါ။ သင်၏အီးမေးလ်တွင်စာလက်ခံသူသည်နောင်တွင်သင့်ထံမှအီးမေးလ်မှမည်သို့ထွက်ခွာနိုင်သည်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရှင်းလင်းချက်တစ်ခုပါဝင်ရမည်။ သာမန်လူတစ် ဦး အနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုရန်၊ ဖတ်ရန်နှင့်နားလည်ရန်လွယ်ကူသည့်နည်းဖြင့်အသိပေးချက်ကိုဖန်တီးပါ။
အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောကျွမ်းကျင်သူများ၏အီးမေးလ်များကိုနေ့တိုင်းကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိသည် ဘယ်တော့မှ မည်သည့် opt-out ယန္တရားရှိသည်။ ဒါကြောင့် ... ငါသူတို့ကိုတာဝန်ခံကိုင်ပြီးတစ် ဦး ဖြည့်စွက်တော့မယ် FTC တိုင်ကြားချက် အီးမေးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းမှဖယ်ထုတ်ခြင်းယန္တရားမရှိပါ။ ငါသည်လည်းအခြားဘလော့ဂါများအဖြစ်ကောင်းစွာဒီလုပ်ဖို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။ ဒီပညာရှင်များကိုတာဝန်ခံဖို့လိုတယ်။
PR ပညာရှင်များအတွက်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ် - အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုရယူပါ။ သင်၏စာရင်းနှင့်စာတိုပေးပို့မှုကိုထိုနေရာမှတိုက်ရိုက်စီမံပါ။ သက်ဆိုင်ရာအီးမေးလ်တွေလက်ခံရရှိတာကိုစိတ်မ ၀ င်စားပေမယ့်ဆီလျှော်တဲ့အီးမေးလ်တွေကိုငြင်းပယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းလိုပါတယ်။
Tags: spam လုပ်နိုင်သည်pitch အီးမေးလ်အသံစာကွင်းprPR ကွင်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးစပမ်း
ဧပြီ 21, 2010 မှာ 8: 27 AM
ဒီနေရာမှာသီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PR စနစ်ကလူတွေအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ဆောက်ထားတဲ့ကွင်းတွေဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို PR စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ (မင်းဆီကိုဘယ်တော့မှမချဉ်းကပ်ခဲ့ရင်) အစုလိုက်အပြုံလိုက်အီးမေးလ်ပေါက်ကွဲမှုအတွေးအခေါ်ကိုကျွန်တော်တုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့တယ်။ အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်မှာသင်၏ပရိသတ်ကိုသိရန်နှင့်လေမှုတ်ရန်နှင့်ဆုတောင်းရန်မဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့နှစ်သက်သောကွင်းများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော်သင်၏ပို့စ်သည်နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းတစ်ခုကို ဦး တည်သွားသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီအီးမေးလ်တိုင်း၏အဆုံးမှာ“ ငါကမင်းကိုမကြားချင်ဘူးဆိုရင်ငါ့ကို ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့ကိုအသိပေးပါ” ဆိုသလား။
ဧပြီ 21, 2010 မှာ 11: 35 AM
ဟိုင်း Dave! အနည်းဆုံးတော့အဲဒီမှာလိုင်းရှိသင့်သည်။ အီးမေးလ်ကိုတစ် ဦး ချင်းစီကိုင်တွယ်သည်ဖြစ်စေမပြုလုပ်သည်က SPAM မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ စီးပွားဖြစ်အခြေပြုအီးမေးလ်အတွက် 'အနည်းဆုံး' စာရင်းအရွယ်အစားမရှိပါ။ 🙂
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စမဟုတ်ပဲပရိုမိုးရှင်းအတွက်အရောင်းမြှင့်တင်မှုတွေလုပ်နေ သ၍ PR ပညာရှင်များသည်လိုက်နာသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
ဧပြီ 21, 2010 မှာ 2: 02 pm တွင်
ငါသည်သင်တို့ကိုကြီးစွာသောအချက်ရရှိပါသည်ထင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် PR PR ပညာရှင်များသည်မီဒီယာကိုတွန်းအားပေးမည့်အစားခိုင်မာသည့်ဆက်နွယ်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ သူတို့၏ဖောက်သည်များအားစျေးကွက်တင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသင်ကြားလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးတော့သင်သည်ပရိသတ်နှင့်အတူဘလော့ဂါတစ် ဦး ကိုစိတ်မပျက်သင့်ကြောင်း should သိသင့်သည်😉
ဧပြီ 24, 2010 မှာ 9: 15 AM
ဧပြီ 27, 2010 မှာ 2: 01 pm တွင်
CAN-SPAM ကိုလိုက်နာခြင်းသည်ကျော်လွှားရန်လွယ်ကူသောဘားတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မှန်ကန်သောလိုက်နာမှုကိုပြenfor္ဌာန်းပါကပုံမှန် PR လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ရှိသည်။ စာရင်းမထားသည့်လင့်ခ်တစ်ခုထည့်ခြင်းနှင့်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာများသည်သင်မည်သည့်နေရာသို့သွားလိုကြောင်းနှင့်ထို PR လုပ်သူအားလုံးသည်ဤနည်းလမ်းကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ သို့သော် CAN-SPAM အရနည်းပညာအရတစ်စုံတစ် ဦး ကသူအား ၀ င်ခွင့်မပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင့်ကိုအီးမေးလ်ပြန်ပို့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုပါကကွဲပြားခြားနားသော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏လွတ်မြောက်မှုကိုအခြားအရာတစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားပါ။ ထို့အပြင်၊ ကြော်ငြာရှင်တစ် ဦး (ထုတ်ဝေသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း) အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏ကြော်ငြာတင်သူများကို (သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ) အားမျှဝေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ သို့မှသာသူတို့သည်အီးမေးလ်လိပ်စာကို PR စနစ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပြeitherနာဖြစ်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျလညျးအငြင်းပွားဖွယ်ကုန်ပစ္စည်းကိုသတင်းထောက်ကိုနောက်ဆုံးစားသုံးသူအဖြစ်ရောင်းချခြင်းမဟုတ်ကြောင်းငြင်းခုံနိုင်ပါတယ်, ထို့ကြောင့်နည်းပညာပိုင်းအရသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အရောင်းအ ၀ ယ်အီးမေးလ်ကိုသင်ပေးပို့နေသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များရရှိရန်အတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဝေလျှင်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ပိုစတာများကပစ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်အများဆုံးသတင်းထောက်နှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိကြောင်းမှန်ကန်ပါသည်။ Spam ကိုကြည့်ရှုသူ၏မျက်စိ၌ရှိသည်။ ထိုနေ့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာ CAN-SPAM အတွေးများ!
ဧပြီ 27, 2010 မှာ 2: 10 pm တွင်
Todd- Can-Spam တရားစွဲဆိုမှု ၁၀၀ ကျော်ရှိခဲ့တာငါသိတယ်။ FTC သည် State AG ၏တရားစွဲဆိုမှုများနှင့် AOL ကဲ့သို့ ISP များသည် Can-Spam အောက်တွင်တရားစွဲနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီတွေဟာရာဇ ၀ တ်သားတွေဆီကနေအတော်အသင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေရခဲ့ပြီး FTC ကဒေါ်လာ ၅၅၀၀၀ ကနေဒေါ်လာ ၁၀ သန်းအထက်အထိရခဲ့တယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ဒေါ်လာသန်း ၈၀ ၀ န်းကျင်တွင်အကြီးမားဆုံးသောဆုများရရှိခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဆုအများစုကိုဘယ်တော့မှမရကြခြင်းဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစွာသည်အခြေချနေထိုင်မှုများတွင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မရှိဘဲအဆုံးသတ်သွားသည်။ တကယ်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာအချက်အလက်ရုံးကိုသွားပြီးဘာတွေတူးလို့ရမလဲကြည့်တော့မယ်။ ရွှင်လန်း!